Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Qatar Airways na -alụ ọgụ maka ịzụ ahịa anụ ọhịa na -ezighi ezi
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Ịrụ ọrụ • Safety • Sustainability News • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị International Air Transport Association (IATA) mepụtara nkwado nyocha anụ ọhịa na -akwadoghị (IWT), site na nkwado nke ROUTES, dị ka akụkụ nke IEnvA - IATA njikwa gburugburu ebe obibi na usoro nyocha maka ndị ụgbọ elu. Nrube isi na ụkpụrụ IWT IEnvA na Omume Akwadoro (ESARPs) na -enyere ndị bịanyere aka n'akwụkwọ ụgbọ elu na United for Declaration Palace Buckingham Palace iji gosipụta na ha etinyela nkwa ndị dị mkpa n'ime Nkwupụta ahụ.
Qatar Airways, onye hiwere otu United for Wildlife Transport Taskforce, bịanyere aka n'akwụkwọ nkwupụta Buckingham Palace na 2016.
Nkwupụta nke Buckingham Obí ezubere ime ezigbo ihe iji mechie ụzọ ndị na -ere ahịa azụmaahịa anụ ọhịa na -ezighi ezi na -erigbu, na -ebugharị ngwaahịa ha.
Na Mee 2019, Qatar Airways ghọrọ ụgbọ elu mbụ nke ụwa iji nweta asambodo na nyocha azụmaahịa anụ ọhịa na -akwadoghị (IWT).
Qatar Airways agbatịla isonye na USAID ROUTES (Mbelata ohere maka ụgbọ njem na -akwadoghị ụdị anụmanụ dị ize ndụ), na -eme ka mkpebi ya sie ike ịlụso ịzụ ahịa anụ ọhịa na ngwaahịa ya.
Qatar Airways, onye guzobere otu Otu United Taskforce Transportation, bịanyere aka n'akwụkwọ akụkọ Nkwupụta nke Buckingham Obí na 2016, nke ezubere ime ezigbo ihe iji mechie ụzọ ndị na -ere ahịa azụmaahịa anụ ọhịa na -ezighi ezi na -erigbu, ịkwaga ngwaahịa ha. N'ikpeazụ na Mee 2017, ụlọ ọrụ ụgbọ elu gara n'ihu bịanye aka na Memorandum of Understanding na ROUTES Partnership. Na Mee 2019, Qatar Airways ghọrọ ụgbọ elu mbụ nke ụwa iji nweta asambodo na nyocha azụmaahịa anụ ọhịa na -akwadoghị (IWT). Asambodo nyocha nke IWT na -egosi na Qatar Airways nwere usoro, ọzụzụ ndị ọrụ na usoro mkpesa dị ebe a na -eme ka ibubata ngwaahịa anụ ọhịa na -ezighi ezi siri ike.
Qatar Airways Onye isi otu otu, Maazị Akbar Al Baker kwuru, sị: “Azụmahịa anụ ọhịa nke iwu na -akwadoghị na nke na -adịghị adịgide adịgide na -eyi ụdị ndụ dị iche iche nke ụwa anyị egwu, ọ na -etinyekwa ahụike na nchekwa, ọkachasị n'ime obodo ndị dịpụrụ adịpụ. Anyị na -eme ihe iji mebie azụmaahịa a na -ezighi ezi iji chekwaa ụdị ndụ dị iche iche ma chekwaa usoro ndụ anyị siri ike. Anyị na ndị isi ụlọ ọrụ ụgbọ elu ndị ọzọ na-agbado ụkwụ iji mesie amụma anyị nke enweghị ndidi ike maka ịzụ ahịa anụ ọhịa na ngwaahịa ya, anyị na-esonyekwa na ROUTES Partnership na-asị-'Ọ naghị eso anyị'. Anyị ga -aga n'ihu na -eso ndị anyị na ha na -arụkọ ọrụ na -eme ka a mata ma melite nchọpụta nke ọrụ anụ ọhịa na -ezighi ezi iji chebe ihe ndị a dị oke ọnụ ahịa. "
Maazị Crawford Allan, onye ndu mmekọrịta ROUTES, nabatara ndị ndu Qatar Airways gosipụtara na mbọ iji gbochie ịzụ ahịa anụ ọhịa na -asị: “Site na omume ya n'ịkwalite mmata, ọzụzụ yana gụnyere ịzụ ahịa anụ ọhịa n'ime amụma ya, Qatar Airways egosipụtala ntinye aka ya na Nkwupụta Buckingham Obí na ebumnuche nke mmekọrịta ROUTES. Enwere m mpako ịhụ na Qatar Airways na -aga n'ihu na mbọ ndị a na ịbụ akụkụ nke ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ na -arịwanye elu ikwu na Ọ naghị eso anyị efe. ”
Ọrịa COVID-19 egosila na mpụ anụ ọhịa bụ ihe iyi egwu ọ bụghị naanị maka gburugburu ebe obibi na ihe dị ndụ, kamakwa maka ahụike mmadụ. N'agbanyeghị amachibidoro ime njem, akụkọ maka ọdịdọ anụ ọhịa na -ezighi ezi n'afọ gara aga ekpughere na ndị na -ere ahịa ka na -eji ohere ha na -ebubata ngwa ahịa site na usoro ụgbọ elu. Qatar Airways na -amata na site na nkwado nke mmekọ USAID ROUTES, ụlọ ọrụ ụgbọ elu nwere ike ịkwaga na mbara ụwa nke na -agụnye gburugburu ebe obibi na nchekwa anụ ọhịa, akụkụ dị mkpa nke akụ na ụba anụ ọhịa na -eme nke ọma yana yana maka obodo.
Dịka onye bịanyere aka n'akwụkwọ nkwupụta Buckingham Palace na Machị 2016 yana onye otu guzobere United for Wildlife Transport Taskforce, Qatar Airways nwere amụma ntachi obi efu maka njem nke anụ ọhịa na-akwadoghị na ngwaahịa ha. Qatar Airways Cargo wepụtara isiakwụkwọ nke abụọ nke mmemme nkwado ya WeQare: rụzigharịa mbara ala na mbido afọ a, gbadoro anya na ibugharịa anụ ọhịa na ebe obibi ha, n'efu. Ebumnuche onye na-ebu ibu iji chekwaa anụ ọhịa na imegharị ụwa ọzọ kwekọrọ na ntinye aka nke ụgbọ elu ịlụ ọgụ maka ịzụ ahịa anụ ọhịa na azụmaahịa iwu na-akwadoghị nke anụ ọhịa wee si otú a chebe gburugburu ebe obibi na ụwa.